Inona avy ireo fitaovana fampitaovana nomerika tokony hampiasaiko? - Easy Multi Display
Fanamarihana iray sur Inona avy ireo fitaovana fampiasa nomerika tokony hampiasaiko?Posted in Digital Signage Par Clemnamoaka Enga anie 25, 2021 Enga anie 26, 2021
Efijery iray ka hatramin'ny efijery telo
Efijery efatra ka hatramin'ny efijery dimy
Aiza no hividianana ireo singa misy anao?
Rindrambaiko nomerika nomerika matanjaka indrindra
Rindrambaiko nomerika nomerika mora indrindra
Ny rindrambaiko fanaovana signage nomerika mora indrindra
Ny serivisy ho an'ny mpanjifantsika dia hanampy anao
Raha te hanomboka amin'ny tontolon'ny signage dizitaly ianao dia mila manana fahatakarana tsara ny karazana fampitaovana nomerika nomerika mitaky ianao, nefa fantatray fa mety ho sarotra be ny hisafidy ny tsara indrindra. Aza manahy, amin'ity lahatsoratra ity, hanampy anao izahay ary afaka mifidy izay tsara kokoa ho anao sy ho an'ny orinasanao ianao!
Eto izahay dia hanazava aminao ny momba ny fikirakirana nomerika nomerika tokony hampiasanao Fisehoan-javatra mora foana. Azonao atao ny misintona ny rindrambaiko Eto.
Voalohany, mila misafidy solosaina mifanaraka amin'ny filanao ianao satria tsy hitovy ny safidin'ny solosainao arakaraka ny isan'ny efijery tianao hampiasaina. Misafidy ny solosaina tsara indrindra azonao atao safidy roa:
Azonao atao ny mividy solosaina efa vonona hampiasa, amin'ny teny hafa dia mividy ny solosainao ianao arakaraka ny zavatra tianao atao;
Azonao atao ny mividy ireo singa solosaina samihafa ary manampy azy ireo ao amin'ny solo-sainao. Mba hanaovana izany dia mila manana fahatakarana tsara ianao amin'ny fomba fanaovana azy, manoro hevitra anao izahay hividy solosaina vonona hampiasa.
Rafitra fikirakirana: Fandresena 7 64-bit / Fandresena 8.1 64-bit / Fandresena 10 64-bit
processeur: Intel Core i5-2500K 3.3GHz / AMD FX-8350 4 GHz
Karatra sary: NVIDIA GTX 1050 / Radeon RX 550
Amin'ity fanaingoana ity dia tsy hanana olana ianao amin'ny fampandehanana ny rindrambaiko efijery iray ka hatramin'ny telo, fa raha te hampiasa efijery mihoatra ny telo ianao dia tsy maintsy manavao ny fanamboarana anao.
Etsy an-danin'izany, Easy Multi Display koa dia hiasa miaraka amina fanaingoana farany indrindra. Ity iray ity dia ohatra fotsiny.
Rafitra fikirakirana: Windows 10 64-bit
processeur: Intel Core i5-9600K 4,6 GHz / AMD Ryzen 7 1800X 4GHz
Karatra sary: Nvidia GTX 1660 / AMD Radeon RX 580
Tahaka ny azonao an-tsaina, raha te-hampiasa efijery efatra na efijery dimy ianao dia mila fikirana tsara kokoa. Ity iray ity dia tsara kokoa ary afaka mahazaka avy efijery iray ka hatramin'ny efijery dimy.
processeur: Intel Core i7-9700K 4,9 GHz / AMD Ryzen 7 3800X 4,5GHz
Karatra sary: Nvidia RTX 1660 / AMD RX VEGA
Azonao alefa amin'ny alàlan'ity fanaingoana ity efijery hatramin'ny enina miaraka. Ity no fananganana tsara indrindra ilainao!
Raha te hampandeha ny solo-sainao amin'ny fampisehoana sy rindrambaiko dia mila telegrama HDMI betsaka araka izay asehonao ianao. Azonao atao ihany koa ny misafidy rafitra wi-fi, izay hamonjy anao ireo tariby HDMI.
Mety mila carte graphique faharoa koa ianao raha toa ka tsy manana seranan-tsambo HDMI ilay voalohany. Zahao ny isan'ny seranana HDMI misy ny karatra misy anao miaraka amin'ny mpanolo-tsaina solosaina mba hisorohana ny tsy ampoizina tsy mahafinaritra.
Manoro anao izahay hividy ireo singa amin'ny solosainao amin'ny Atody vaovao tranokala. Eto ianao dia afaka mahita ireo singa rehetra niresahanay na nividy solosaina mivantana. Raha mila fanampiana ianao hisafidianana ireo singa misy anao na torohevitra fotsiny dia aza misalasala Mifandraisa aminay.
Ny karazan-efijery rehetra dia hiasa miaraka amin'ny Easy Multi Display, noho izany marina, eto dia manoro anao izahay hisafidy ny efijery tsara indrindra izay hifanaraka amin'ny fivarotanao. Ny rindrambaiko dia mamela anao hizara ny efijery tsirairay ho faritra efatra samihafa hahafahanao mampiseho loharano 24 miaraka raha manana efijery enina ianao.
Manana mpanjifa maro nifidy ny "orinasa"kinova izay manohana efijery enina ary manana fanaraha-maso lavitra fa afaka misafidy tsara ny"efijery iray"kinova raha tsy handefa afa-tsy amin'ny efijery iray ianao.
Etsy ambany no ahitanao ny Easy Multi Display mihetsika amin'ny efijery efatra sy solosaina gamer. Ny sary roa voalohany dia mampiasa haino aman-jery iray isaky ny efijery ary ny sary fahatelo dia mampiasa ny asan'ny rindrinay horonantsary.
Fampirantiana nomerika an'ny masoivoho momba ny trano sy trano
Uniqlo mitahiry takelaka nomerika
Ankehitriny manana ny fitaovana ilaina ianao dia mila rindrambaiko matanjaka nefa tsy lafo. Tianay ny manolotra anao ny rindrambaiko Easy Multi Display noho ny antony maro:
Izy io dia iray amin'ireo rindrambaiko famantarana nomerika matanjaka indrindra eo amin'ny tsena;
Izy io koa dia iray amin'ireo mora indrindra eny an-tsena (azo aloa amin'ny indray mandeha sy tsy misy famandrihana);
Namorona azy izahay ary fantatray fa ho afa-po ianao;
Manohy manavao azy io hatrany izahay mba hitazomana izany hatrany;
Io no mora indrindra amin'ny fampiasana rindrambaiko famantarana nomerika eny an-tsena;
Ny serivisy ho an'ny mpanjifanay dia manampy anao amin'ny fametrahana hatramin'ny fampiasana.
Araka ny hitanao, Easy Multi Display dia iray amin'ireo tsara indrindra, andao hojerentsika amin'ny antsipiriany ny antony!
Diso fanantenana izahay tamin'ny mety hisian'ny rindrambaiko hafa ary tianay ny hanome ny tsara indrindra amin'ny mpanjifanay, izany no nahaterahan'ilay rindrambaiko. Misaotra ny Easy Multi Display, hahafahanao mandefa loharanom-baovao 24 amin'ny efijery 6 miaraka, afaka mampiasa ny Videowall anay "hanakambana" ny efijeryo ianao ary handefa horonan-tsary iray ohatra.
Hanana fidirana amin'ny lahasa hafa maro hafa ianao toy ny fiasa "Multi Users" mba hanomezana zony bebe kokoa na latsaka arak'ireo mpampiasa, azonao atao koa ny mampiasa ny fanaraha-maso anay hanovana ny fampisehoana anao amin'ny tsindry iray. Azonao atao ihany koa ny mandefa hafatra amin'ny haino aman-jery na mandamina mialoha ny fampisehoana anao!
Mazava ho azy, azonao atao ny mampiseho karazana haino aman-jery maro toy ny:
Sary (JPG, GIF, PNG ...);
Lahatsary (MP4, AVI, MOV ...);
Antontan-taratasy (PPT, DOCX, PDF ...);
Rindrambaiko (Microsoft Words, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ...).
Ny ankamaroan'ireo rindrambaiko hafa dia hanolotra anao handoa ny vidin'ny rindrambaiko avy eo handoa famandrihana bebe kokoa na latsaka lafo arakaraka ny isan'ny efijeryo. Ho takatrao fa mety ho lafo be ho anao sy ny orinasanao izany.
Ao amin'ny Easy Multi Display dia manolotra anao formula telo namboarina tamin'ny orinasanao ary indrindra tsy misy famandrihana!
Easy Multi Display dia mora ampiasaina ary azonao atao ny manamboatra ny rindrambaiko amin'ny dingana telo tsotra:
Safidio ny isan'ny efijery anananao;
Zarao amin'ny faritra maromaro ny efijery misy anao;
Safidio ny haino aman-jeryo.
Azonao atao ny mampiasa ny rindrambaiko!
Ny ekipanay dia hanampy anao amin'ny alàlan'ny fampiasana Easy Multi Display hahafahana mampiasa tsara ny rindrambaiko!
Raha manana olana ianao dia azonao atao ny misintona ny anay user guide, tsidiho ny FAQ. Ampahany amin'ny tranokalanay na mifandraisa aminay mivantana support@easy-multi-display.com ho an'ny fanampiana manokana.
Fanamarihana iray momba ny “Inona avy ireo fitaovana fampitaovana nomerika tokony hampiasaiko?"
Ping: Inona no atao hoe seranana fampisehoana? - Rindrambaiko Digital Signage & rindrambaiko Wall Wall